DEVice KIngdoms - Nyika Yevanhu Technology
World Vanhu Tekinoroji
BHUKU PAMUSORO PEMAFILIPPINES (4K UHD) 4K Vhidhiyo
Nyika uye Vanhu, muzvarirwo, Shiri-ziso, Zvinyorwa. Miscellaneous., Encyclopedia, Encyclopedia
Palawan chidimbu cheparadhiso, chidimbu chechitsuwa chakazara nemhuka dzesango dzinoshamisa, misha yekuredza inoshamisa uye UNESCO World Heritage Site. Wave kumhuka dzine njodzi paKalawit Wildlife Sanctuary kana kuongorora chikepe cheJapan chakapunzika paCoron Island, inoonekwa seimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekudonha.
KUKWANYA PAMUSORO PEMAZUVA (4K UHD) (4K Vhidhiyo Ultra HD)
Nyika uye Vanhu, muzvarirwo, Shiri-ziso, Encyclopedia
Maldives, zviri pamutemo Republic of Maldives, inzvimbo diki yezvitsuwa muSouth Asia iri muIndian Ocean. Inowanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweSri Lanka neIndia, angangoita 700 makiromita (430 mi) kubva kuAsia mainland. Cheni ye26 atoll inotambanuka kubva kuIhavandhippolhu atoll kuchamhembe kusvika kuAduu atoll kumaodzanyemba (mhiri kweEquator). Maldives, inotora iyo ndima ...
Bhururuka UYE SCOTLAND (4K UHD) - mimhanzi inozorodza mune runako runoshamisa (4K Ultra HD vhidhiyo)
Nyika uye Vanhu, Shiri-ziso, Encyclopedia, Encyclopedia
Scotland, nyika inozvimiririra yekuzvitonga uye yezvematongerwo enyika chikamu cheUnited Kingdom cheGreat Britain neNorthern Ireland, inharaunda yenyika ine zvematongerwo enyika, zvepanyama uye nenzvimbo, tsika kana nhoroondo miganho inogona kunyatso tsanangurwa nekugadziriswa, kana kusanzwisisika. (mune ino kesi, kazhinji, inova chikamu cheUnited Kingdom, chimiro chehurumende kana hurumende mune iyo mutungamiriri wenyika ari mambo, ...
MHANYA PASI ICELAND (4K UHD) - Mumhanzi unozorodza mune runako runoshamisa (4K Vhidhiyo Ultra HD)
Nyika uye Vanhu, muzvarirwo, Shiri-ziso
Iceland ndiyo nyika yechitsuwa yekuchamhembe muNorth Atlantic Ocean ine huwandu hwevanhu 356 uye nzvimbo ye991 km103 (000 sq mi), ichiita nyika ine vanhu vashoma muEurope.
MHARAI ISODENI (4K UHD) - mimhanzi inozorodza mune runako runoshamisa (4K Ultra HD vhidhiyo)
Sweden zita repamutemo ndihwo Humambo hweSweden (iyo yeSweden inyika yekuchamhembe muNorth Europe. Inotarisana neNorway kumadokero nekuchamhembe, neFinland kumabvazuva. .
Mexico 4K - mimhanzi inozorodza uye akanaka mavhidhiyo echisikigo
Mexico inozivikanwa nekuda kwemahombekombe ejecha jena, hunhu hunoshamisa uye zvivakwa zvekare zvekuvaka zvakasiiwa nemasaini enguva. Kune nzvimbo yeAztec yekuchera matongo mutaundi rekare riri mumoyo weMexico City. Vashanyi vanogona kuyemura mabasa mazhinji akanaka ekuvaka akadai saTeatro Palacio de Bellas Artes, Monument yeRevolution, Cathedral yeMetropolitan Church.
BHUKU PAMUSORO PEMA DOLOMITES (4K UHD) - Rinozorodza Mimhanzi neStunningly Yakanaka Zvisikwa (4K Vhidhiyo Ultra HD)
Nyika uye Vanhu, muzvarirwo, Encyclopedia
MaDolomites, anozivikanwa zvakare seDolomites, maDolomites kana maDolomites, makomo ari munzvimbo yekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweItari. Ivo vanoumba chikamu cheSouth Limestone Alps uye vanotambanudza kubva kuRwizi rweAdige kumadokero kusvika kuPieve di Cadore Valley kumabvazuva. Iyo yekuchamhembe uye yekumaodzanyemba miganhu inotsanangurwa nePuster Valley uye iyo Sugana Valley (chiItaly: Valsugana). MaDolomites ari mu ...
MHENZIRA KUDENGA Denmark (4K UHD) - mimhanzi inozorodza nerunako rwekunaka (4K Ultra HD vhidhiyo)
Denmark, zviri pamutemo Humambo hweDenmark, inyika yekuchamhembe muNorth Europe. Denmark pachayo, inova yekumaodzanyemba kwenyika dzeScandinavia, inosanganisira iyo Jutland peninsula uye nzvimbo yezvitsuwa zve443 zvinonzi zvitsuwa, hombe dzadzo dziri Zeeland, Funen uye chitsuwa cheNorth Jutland. Zvitsuwa zvinozivikanwa nenzvimbo yakatetepa yekurima uye mahombekombe ane jecha, kukwira kwakadzika uye mamiriro ekunze akadzikama. Denmark iri ...
AUSTRIA mu8K ULTRA HD - Famba nzvimbo dzakanakisa muAustria nekuzorora 8K TV mumhanzi
Austria inyika diki. Kunyangwe isina huwandu uye hwakasiyana hwezvinokwezva, semuenzaniso, muItari kana Girisi, Austria ine runako rwayo. Asi iwe unogona kugara uchigadzira runyorwa rwepamusoro gumi akanakisa eAustria ayo asingafanire kufuratirwa kana uchifamba muAustria. Ngatione zvavari maererano nenhamba yevashanyi: Schönbrunn Palace: iri pamusoro wevashanyi ...
MHURI YENYIKA mune 8K ULTRA HD • Inoshamisa mhuka dzesango uye zvakasikwa zvinonzwika 8K TV
Nyika uye Vanhu, muzvarirwo
Mune ino 8K Ultra HD vhidhiyo, tinoratidzira nharaunda yedu, inova musha kune akasiyana zvisingaite zvinhu zvipenyu, mhuka, uye ichi ndicho chisikwa chezvinhu zvipenyu icho chinobatsira zvakananga mukusimudzira kwehupenyu papasi. Nhengo yega yega inoita chinzvimbo chakasarudzika papasi redu Kupera zvishoma nezvishoma kwezvisikwa nemhuka kwakakosha kupfuura isu zvatingafungidzira sezvo zvichizopedzisira zvaendesa ...
Ocean Colors 8K ULTRA HD - Akanakisa 8K Mhuka Mhuka dzeRelaxation & Soothing Music
OCEAN COLORS yakanaka uye inozorodza bhaisikopo re8K nezve hupenyu hwegungwa uye mhuka dzegungwa. Muvhidhiyo iyi, tinogona kucherechedza mhuka dzemumvura kubva pasi rese, iine mavara akanaka uye maumbirwo ekurara kana yekuzorora nguva. Inofungidzirwa kuti 70 uye 80 muzana yehupenyu hwese pasi pano iri pasi pegungwa, uye makungwa ane 99 ...
Zororo rakanaka. Uye kutandara kwakanyanyisa kuri nani ... uye kunonakidza 😎
Nzvimbo dzakanaka dzepasi kubva paziso reshiri 🚁📷 16
Shiri dzinoshamisa 🌴🦜
Tinoda kugovana nemunhu wese kuti tinoona sei nyika mu8K. Peru 8K HDR inoongorora vanhu uye nharaunda dzePeru. Kurekodha uku kwakagadzirwa nemhando yayo yepakutanga.
Shiri Dzenyika Dzinonyanya Kushamisa 8K ULTRA HD - Relaxing Music & Natural Sounds 8K TV
Shiri ndedzerimwe boka remhuka dzemhuka uye zvipuka zvine mapapiro izvo zvinonyanya kuzvibvumira kubhururuka, kunyangwe paine shiri dzisingamhanye zvakare. Kazhinji, shiri dzinobhururuka, dzosvetuka, dzinofamba kana kushambira zvine spidhi inoshamisa uye….
MHARAI KUFRANCE (4K UHD) - Mumhanzi unozorodza uye wakanaka hunhu - 4K UltraHD vhidhiyo
France iri muWestern Europe, yakanaka kwazvo France inozivikanwa neguta rakanyanya kudanana reParis pasi rese, pamwe nezvivakwa zvakawanda zvakavakwa uye nzvimbo dzevashanyi munyika yese. Huya kuFrance parwendo rweFrance kuzoshanyira rakanakisa guta rinoshamisa reRoma, kuyemura mupata wakanaka usina mhosva weMorienne, ... Rwendo rweFrance rwunogara rwuri sarudzo huru kune vafambi vanoda ...
Inoshamisa Oman mu4K UHD - Iwo akanaka kwazvo masosi epasire nyika yekunze yeArabhu
Nakidzwa nemaonero anokwezva ezvakanaka kwazvo zveOman! Iyo mimhanzi inozorodza, isinganzwisisike inoperekedza kuona nzvimbo yakanakira kuzorora, kufungisisa uye kushushikana kwekushushikana. Tinovimba kukufadza nezvinoyevedza zvakadai se: The Magnificent Wadi Ghul (03: 10), (44: 20) Iyo Inoshamisa Wadi Shab neAl Fanal Village (08: 31) Iyo inonakidza mvura yebhuruu-girini yeguta rekare re Qalhat (06:22), (01:46:20) Chishamiso chezvakasikwa - tsime rekarst ...
Costa Rica 4K - Mumhanzi unozorodza uye akanaka mavhidhiyo ezvisikwa
Costa Rica inyika diki iri muCentral America, iro guta guru riri San Jose. Kunyangwe iri diki saizi, Costa Rica Costa Rica (Spanish Costa Rica (Spanish ichiri imwe yenyika inzvimbo ine miganho yezvematongerwo enyika, panyama, nenzvimbo, tsika kana nhoroondo, iyo inogona kutsanangurwa zvakajeka nekugadziriswa, uye kusajeka (mu iyi kesi, kazhinji ndima ine zvematongerwo enyika, epanyama-geographical, tsika kana ...
MHANYA PAMWE DUBAI (4K UHD) - Mumhanzi unozorodza uye akanaka mavhidhiyo ezvisikwa - 4K Ultra vhidhiyo
Nyika uye Vanhu
Seimwe yeanomwe emirates, nyika yeIslam inotongwa neEmir yeUnited Arab Emirates (UAE) muchidimbu, Dubai inozivikanwa pasi rese pamusoro peanopfuura ekuvaka kwayo akavaka, masiketi uye nzvimbo dzekutengesa dzine simba. kubwinya kwehotera-nyeredzi nomwe ... asiwo kukwezva kweMaketani eGoridhe, iro guta rekare iguta rakakura rine vagari vanowanzove vakabatikana ...
Nyika uye Vanhu, Zvinyorwa. Miscellaneous.
Без рубрики, Nyika uye Vanhu, Zvinyorwa. Miscellaneous., Encyclopedia
Nyika uye Vanhu, Zvinyorwa. Miscellaneous., Encyclopedia
Ndivanaani aya matangi e septic uye zvaari
Kana iwe uchinge uchiita basa rekuvaka imba yako, saka mune chero mamiriro ezvinhu iwe waifunga nezvekuitwa kwetsvina yehunyanzvi zvivakwa, volumetric, planar kana mitsara yekuvaka system iyo ine pasi, pamusoro pevhu uye (kana) pevhu chikamu, chine mutoro -kutakura, uye mune dzimwe nguva, kuvhara zvivakwa uye uye netiweki yemapaipi ekubviswa kwemvura yakasviba yemvura Rwizi runoff Rwizi runoff - inofamba ...
Chikafu cheItaly: tsika, ndiro dzakakurumbira dzaunofanira kuedza
Kunyangwe hazvo zita repamutemo reItari iri reRepublic Republic (chiItaly chakazvimisikidza senyika imwe chete muzana ramakore rechiXNUMX, chikafu cheItaly chakadzokera muzana ramakore rechitanhatu BC.Uye izvi, iwe unoona, zvinoita kunge zvinonakidza.Chikafu cheItari. yehunyanzvi hwavo hwekugadzirira, izvo zvinosanganisira kushandiswa kweakanyanya mhando zvigadzirwa, zvitsva, zvinonyanya kuwanikwa munzvimbo iripedyo,
Saiti saiti: yekutanga-kubata mutengi kubatwa
Без рубрики, Kubatsira webmaster, Nyika uye Vanhu, Yakakurumbira Yandex uye Google mibvunzo, Zvinyorwa. Miscellaneous.
Makambani asingatengese zvinhu, asi achipa rubatsiro kuvagari nemasangano boka revanhu vane zviitiko zvakarongwa nemaune kuti vabudirire zvinangwa zvakafanana Izwi iri rinoshandiswa kunyanya kureva boka renzanga rinogovera mashandiro, zvakare shandisa iyo Internet kutsvaga vatengi, asi zvitoro zvepamhepo hazvina kukodzera kwavari - hazvitengese. Dzimwe nguva hautombode mapeji mazhinji. Zvinotonyanya kukosha kujekesa ...
Klops: Koenigsberg, hanyanisi, snellklops
Nyika uye Vanhu, Zvinyorwa. Miscellaneous., Encyclopedia, Encyclopedia
Kaliningrad iguta rinoshamisa, nzvimbo huru yekugara, izwi rinoshandiswa mumitsara munzvimbo dzakasiyana dzezviitiko zvevanhu, zvinoti, vagari vacho, sekutonga, vasina kuita zvekurima, izvo kusvika 1946 yaive isiri-systemic unit yenguva kuyerwa, uko kwakaitika mutsika zhinji kwaireva kutenderera kumwe kwekuchinja kwemwaka (chirimo, zhizha, matsutso, nguva yechando) yaive Königsberg Prussian uye yaive chikamu che ...
Sausage. Russian neGerman: ndiani anokunda?
Ndekupi nzvimbo yakakura yedzinza nemagariro muEastern Europe, iro zita renhoroondo yenyika dzeEast Slavic, sausage yakabva kuRussia? Sausage dzeGerman neRussia dzakagara sei muRussia kana Russian Federation (RF), nyika iri kuEastern Europe neNorth Asia? Ndeapi masoseji akadyiwa nemadzitateguru edu uye zvakadii masoseji? Tinokukoka iwe utaure ... Sausage yakagara iri chikamu chakakosha pane kwedu kudya. Mumwe munhu…
Tantra Yoga: Iwo mashanu Masimba aMwari eShakti
Yoga ipfungwa mutsika dzechiIndia, mupfungwa yakafara, zvichireva seti yemaitiro akasiyana emweya, epfungwa uye epanyama akagadzirwa nenzira dzakasiyana dzechiHindu nechiBuddha uye yakanangana nekuyerera - iyo yoga pfungwa mutsika dzeIndia, nenzira yakafara, zvinoreva a seti yemaitiro akasiyana emweya, epfungwa uye epanyama akagadzirwa nenzira dzakasiyana izwi risinganzwisisike rinogona kureva: Kutungamirwa kweiyo vector - ...
1 2 3 ... 5 Mberi "
Wedzera chinyorwa pasina kunyoreswa
Isu tiri pa instagram
Wona pa Instagram
Categories Sarudza musoro Без рубрики Kubatsira webmaster Nyika uye Vanhu Yakakurumbira Yandex uye Google mibvunzo muzvarirwo Zvirimwa zvakatanga kutsanangurwa mubhuku Species Plantarum Shiri-ziso Homemade Zvinyorwa. Miscellaneous. Alphabetical kukosha mapeji Mhuka taxa yakatumidzwa mushure mevanhu Insect taxa yakatumidzwa mushure mevanhu Dyara taxa yakatumidzwa mushure mevanhu Maruva easia Maruva eNorth America Endemics yeAustralia Endemics yeChina Endemics yeNorth America Endemics yeSouth America Endemics yeJapan Encyclopedia Encyclopedia
Wedzera chinyorwa nekunyoresa:
Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo, kusanganisira nezve maneja makuki, apa: Cookies mutemo
Chinyorwa kubva	WP Mifananidzo
Tumira mhinduro ...